Kooxda boorsada weyn ee Paris Saint-Germain ayaa ku dhow inay 8 milyan oo ginni ku dalbato kabtanka iyo daafaca kooxda Chelsea John Terry si ay uga kaxeeyaan Stamford Bridge. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Arsenal Theo Walcott ayaa laga yaabaa inuu si la yaab leh ugu wareego kooxda kale ee ka dhisan London ee Blues. Walcott ayaa hal sanno ay uga hartay qandaraaskiisa, waxaana uu hakinayaa heshiis cusub oo uu u saxiixo Arsenal sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Liverpool ayaa weli sii wada qiimeynta ay ku heyso ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Swansea Scott Sinclair, kaasoo weli hakinaya qandaraas cusub oo looga soo bandhigay Liberty Stadium. Waxaa ciyaaryahanka lagu qiimeeyaa 6 milyan ginni. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Lyon ayaa dareen gelisay kooxo badan ka dib markii ay sheegeen in goolhayahooda Hugo Lloris inuu suuqa saran yahay, islamarkaana ay ku doonayaan 15 milyan ginni. Wargeyska The Sun ayaa qoray in Tottenham ay dooneysa, Daily Star waxa ay sheegeen in Liverpool ay xiiseyneyso goolhayaha taasoo su’aal gelineysa mustaqbalka Riena, halka shabakada goal.com ay qortay in Lloris laga doonaya garoonka Emirates ee kooxda Arsenal.
Ciyaaryahanka la qabsan waayay kooxda Tottenham Giovan Dos Santos ayaa ku dhow inuu ku biro kooxda Malaga ee dalka Spain. Sida ay qortay Daily Mirror.
Liverpool iyo Chelsea ayaa loo sheegay inay tahay inay ugu yaraan miiska soo saaraan 12 milyan ginni hadii ay doonayaan inay la soo wareegaan xiddiga kooxda Wigan Victor Moses. Sida ay qortay Daily Mirror.
“Waa ciyaaryahan Arsenal ah.”: Waxaa sidaasi yiri Roberto Mancini oo qaboojiyay wararka Robin Van Persie la xiriirinaya kooxda Manchester City. Sida ay qortay Daily Mirror.
Gylfi Sigurdsson ayaa ku dhow inuu u saxiixo Tottenham maanta ka dib markii Liverpool ay ka laabatay xiiseyntiisa madaama uu dalbaday mushahar aysan Reds dooneynin inay bixiso, sida ay qortay Daily Express.
Aabaha dhalay Alan Dzagoev ayaa shegay in Tottenham ay dooneyso inay la soo wareegto willkiisa oo u ciyaara kooxda CSKA Moscow, waxaana laga yaabaa inuu noqdo saxiixa ugu horeeya ee tababare Andre Villas-Boas marka si rasmi ah loogu magacaabo tababaraha Spurs. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Adam Johnson ayaa isbuucaan kala munaaqashoon doona tababaraha Manchester Roberto Mancini mustaqbalkiisa. Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara oo 24 jir ah ayaa waxaa doonaya Liverpool, Everton iyo Sunderland, sidoo kale waxaa xiiseyneysa Tottenham. Sida ay qortay Daily Star.
Joao Moutinho ayaa ku taageeray ninka ay isku wadanka yihiin Andre Villas-Boas inuu macalin u noqdo Tottenham, waxaana laga yaabaa inuu u raaco White Hart Lane. Sida ay qortay Daily Mail.
Newcastle ayaa ogolaatay inay shan milyan ginni kula soo wareegto daafaca reer Brazil ee kooxda FC Twente Douglas. Sidaasi waxaa qortay Daily Express.
Danijel Pranjic ayaa xusay inuu u saxiixi doono Everton ka dib markii uu Bayern Munich kaga tagay isagoo xor ah. Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Wadada ayaa u banaan ciyaaryahanka Inter Milan ee reer Brazil Maicon inuu 6 milyan ginni ugu dhaqaaqo kooxda ka dhisan Stamford Bridge ka dib markii Real Madrid ay ka baxday tartankii ay ugu jirtay 31 jirkaas. Sidaasi waxaa qortay Daily Mail.
Tababaraha kooxda Blackburn Rovers Steve Kean ayaa ku dow inuu Newcastle kala soo wareego Leon Best, waxaana ay ku doonayaan 2.25 milyan ginni si uu u buuxiyo booskii uu baneeyay Yukubu.Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Wakiilka Mario Balotelli ayaa sheegtay in ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay inuu u qalmo 200 milyan ginni hadiiba uu xagaagan koox kale u dhaqaaqayo. Sida ay qortay The Sun.
Kooxda Talyaaniga ee Caglairi ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u la soo wareegtay ciyaaryahan Andrea Dossena oo kaga soo biiray kooxda Sampdoria.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay dalab 8 milyan ginni ah ka diiday kooxda Juventus oo ku aadan kabtankooda Robin van Persie, sida ay qortay jariirada Gazzetta dello Sport.
Juventus ayaa sidoo kale heysata 10 maalmood oo ay ku go’aansato ciyaaryahanka heerkiisa sareeyo ee la filayo inay keeni doonaan, sida ay qortay Corriere dello Sport.
Mustaqbalka ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ee kooxda AC Milan ayaa shaki la geliyay mar kale iyadoo laga yaabo inuu kooxda ka tago sida ay qoreyso Tuttosport.
Ciyaaryahanka kooxda Napoli Ezquel Levazzi ayaa ka degay Paris si uu u dhameystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxda ka ciyaarta caasimada France ee PSG. Sida ay qortay jariirada Faransiiska L’Equipe.
Wargeysyada Spain waxa ay maanta diirada saarayeen kaliya guushoodii koobka Euro 2012 ee ay xalay ku guuleysatay xulka Spain. Waxyaabaha ay ka qoraan suuqa kala iibsiga wixii ka bilowda berri ayaan idiin soo gudbin doonaa.